Adeegyada Shantui Janeoo Shiheng Canggang mashruuca dhismaha jidka tareenka | Shantui
Shantui Janeoo adeegyada Shiheng Canggang mashruuca dhismaha jidka tareenka
Dhawaan, lixda qaybood ee SjHZS240-3R warshad isku-darka shubka ah ee ay Shantui Janeoo u isticmaashay dhismaha Shiheng-Canggang Intercity Railway ayaa la rakibay oo si guul leh loo gaarsiiyay macaamiisha.
Dhammaan qalabku waxay qaataan qaab-dhismeedka sibidhka ee xaashida, qalab kastana wuxuu ku qalabaysan yahay 500-tan oo sibidh ah silo silo ah, taas oo si weyn u kordhinaysa dhibka dhismaha. Xiliga dhismuhu socdo waxa ay ahayd xili roobaad, goobtuna waxa ay ahayd mid dhiiqo leh. Si loo hubiyo xilliga dhismaha, shaqaalaha adeegyadu waxay inta badan xidhaan jaakadaha roobka iyo kabaha si ay u fuliyaan dhismaha roobka, iyagoo si dhab ah u dhaqmaya dhaqanka waxtarka leh ee "maalin laba maalmood iyo badh" oo leh waxqabadyo la taaban karo. Dadaalka aan kala go’a lahayn ee ay wadaan hawl-wadeennada adeegga ayaa waxa la gaadhsiiyay macmiisha badeecadahaasi oo la hubo tiro iyo tayo ahaanba, waxana ay hadda marayaan xaalad wanaagsan.
Waxaa la sheegay in Shiheng-Canggang Intercity Railway uu yahay khad muhiim u ah qorsheynta isku xirka tareenka ee isku xira Beijing-Tianjin-Hebei. Waxay muhiim u tahay dhismaha "afar toosan iyo afar siman" qalfoofka muhiimka ah ee shabakada tareenka ee Beijing-Tianjin-Hebei, iyo taraafikada hal saac ee Shijiazhuang, caasimadda Gobolka Hebei, ilaa magaalooyinka waaweyn ee ku hareeraysan. Aad bay muhiim u tahay in la xaqiijiyo xidhiidhka degdega ah ee u dhexeeya koonfur-bari Hebei iyo Tianjin iyo wixii ka dambeeya; buuxinta baahida isu-dhaafsiga socodka rakaabka ee magaalooyinka iyo magaalooyinka ku teedsan jidka iyo hagaajinta ururinta iyo qaybinta dekedda.
Waqtiga boostada: Seb-25-2020